Xukuumadda Somaliland Oo Sharaxday Go'aamada Lagu Xayiray Isu Socodka maalmaha Ciidda - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Xukuumadda Somaliland Oo Sharaxday Go’aamada Lagu Xayiray Isu Socodka maalmaha Ciidda
Hargeysa(ANN)-Xukuumadda Somaliland, ayaa Sharaxaad ka bixisay go ‘aamo shalay kasoo baxay guddida la tacaalista Cuddurka COVID-19 ee heer qaran oo shaaciyay in la joojiyay gebi ahaanba isu socodka gaadiidka Iyo dadka maalmaha lagu jiro Ciiddal-fidriga.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Isla. markaana ah guddoomiyaha Guddida Covid-19, ayaa faahfaahin ka bixiyey go’aamada ay soo saareen shalay ee ay ku xaddideen isu-socodka dadka iyo gaadiidka ee gobollada dalka si looga hortago faafitaanka xannuunka Coronavirus.
Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil (Saylici) oo maanta la hadlay warbaahinta dowladda, waxa uu sheegay inaanay jirin isu-socodka gaadiidka iyo dadka ee gobollada, balse la oggol yahay in isu-socodku ku koobban degmooyinka gobolku ka kooban yahay, isagoo taas ku sababeeyey in jiraan gobollo dalka ka mid ah oo uu ku badan yahay Xannuunka Covid-19.
sidaa awgeed ay go ‘aankaa usoo saareen si aan xannuunku ugu faafin gobolada kale.